शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल होइन मन्दिर हो ! | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल होइन मन्दिर हो !
४ आश्विन २०७७, आईतवार ११:१३
मेरो नाम कमला रेग्मी हो । म अहिले ५३ वर्ष पुगेँ । म भर्खरै कोरोना सङ्क्रमणबाट निको भएर फर्किएकी हुँ । १७ दिन म टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसियु (इन्टेन्सीभ केयर युनिट)मा बस्नुपर्‍यो । ३ दिनसम्म त म बेहोस थिएँ ।
टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल मेरो लागि मन्दिर हो । मैले नयाँ जीवन पाएको ठाउँ हो यो अस्पताल । डाक्टरहरू कोरोना लागेका मान्छेलाई छुँदैनन्, ढोकाबाट हेरेर जान्छन् भन्ने सुनेकी थिएँ । तर होइन यहाँ त हामीलाई झ्याप्प अँगालो हाल्छन् । बिरामीलाई साह्रै माया गर्छन् । यहाँका डाक्टर त भगवान् हुन् ।
म भदौ १२ गते अचानक बेहोस भएँ । त्यसपछि मलाई आफन्तले भैँसे पाटीबाट मेडीसिटि अस्पताल पुर्‍याए । त्यहाँ मलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भयो । त्यसपछि भने मलाई त्यो अस्पतालले भर्ना गरेन । मलाई त्यहाँ चार घण्टा अस्पतालमा राखेको थियो होला । तर त्यहाँ त्यो अस्पतालले ८२ हजार रुपैयाँ उठायो । त्यसमा ३० हजार रुपैयाँ त विभिन्न मास्क र पिपिईको नै तिर्नुपर्‍यो । तर पनि त्यो अस्पतालले मेरो उपचार नै गरेन । कोरोना लागेको थाहा नहुँदासम्म पैसा असुल्यो । कोरोना लागेको थाहा पाएपछि मलाई अस्पतालबाट निकाल्यो ।
त्यसपछि म यो टेकुको अस्पतालमा भर्ना हुन आइपुगेँ । हुन त मेडसिटि अस्पतालले त मलाई ह्याम्स अस्पताल पठाउन खोजेको थियो । मेरा आफन्तले टेकु लान्छौँ भन्दा पनि त्यो अस्पतालले मलाई टेकु पठाउन मानेन । सरकारी अस्पतालमा पठाउँदैनौँ भनेर उल्टै मेरा आफन्तसँग झगडा गरेछ । पछि जर्बजस्ती गरेर टेकुको अस्पतालमा आइपुगेँ । यहाँ मैले १७ दिन आइसियुमा बस्दा एक रुपैयाँ पनि तिर्नु परेन । हामीसँग भएको सबै पैसा निजी अस्पतालमा सकिसकेको थियो । मलाई त अहिले पैसा मात्र लुट्ने निजी अस्पतालले हामी जस्ता मान्छेलाई त उपचार नगराईकनै मार्छन् कि जस्तो पो लाग्छ किनकि मेरो भोगाई यस्तै रह्यो । मलाई टेकुको अस्पताल ल्याएपछि मात्र मेरो ज्यान जोगिएको हो भन्ने लाग्छ ।
यो सरकारी अस्पताल भए पनि यहाँ सबै सुविधा छ । डाक्टर र नर्सहरूको व्यवहार पनि राम्रो छ ।
कस्तो अचम्म हेर्नुहोस् त ! उपचार नै नगर्ने अस्पतालमा ८२ हजार खर्च भयो । जहाँ उपचार गराएर निको भयो त्यहाँ खर्च नै लागेन ।
यो कथा कमला रेग्मीसंग भदौमा गरिएको कुराकानीमा आधारित भएर लेखिएको हो ।
मजदुरहरू उधारोमा जीवन चलाइरहेका छन्
१५ भाद्र २०७७, सोमबार १९:०९
दिनमा २० घण्टासम्मको ड्युटी गर्यौं
२४ भाद्र २०७७, बुधबार १५:४३
२३ असार २०७७, मंगलवार १८:०२
Total Visits: 18,442